मिस नेपालको अडिसन आठ सहरबाट – Chitwan Post
मिस नेपालको अडिसन आठ सहरबाट
भरतपुुर । ‘मिस नेपाल–२०२०’ का लागि यसवर्ष ८ वटा सहरहरुमा अडिसन हुने भएको छ । चितवनसहित पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगन्ज, धरान र बिर्तामोडमा अडिसन गर्ने तयारी भइरहेको आयोजक संस्था ‘दी हिडन टे«जर’ले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो ।
२०२० को मे १५ तारिखका दिन फाइनल हुने प्रतियोगिताका लागि अनलाइन फर्म खुलाइसकेको मिस नेपालकी अफिसियल कोरियोग्राफर रचना गुरूङ शर्माले जानकारी दिइन् । मिस नेपालको वेबसाइट र मोबाइल एपमार्फत पनि फर्म भरेर प्रतियोगितामा सहभागी हुन सक्ने उनले बताइन् ।
आवेदन दर्ताको अन्तिम मिति भने मार्च २७ लाई तोकिएको छ । किशोरीहरुको सुन्दरता र क्षमता प्रदर्शनका लागि राम्रो माध्यम बन्दै गएकोले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट अडिसन दिन निःशुल्क फर्म भर्न आयोजकले आग्रह गरेको छ । प्रतियोगिताबाट विजेता बन्नेले दुई लाख ५० हजार रूपैयाँबराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
ओमशान्ति आधारभूत विद्यालयमा बस सेवा
ग्यासको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन : सञ्चित बढी भयो कि लुकाइयो !
निर्दोष जीवनको नयाँ गीत बजारमा
कलाकार भीमको ‘कर्म’ लकडाउनको उपहार !
पत्रकार र कलाकारलाई पुरस्कृत गरिने